के बिक्री टोली ब्लग हुनु पर्छ? | Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 6, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
म बाट एक सर्वेक्षण परिणाम हेर्न भयो शक्ति बिक्री र मैले परिणाम देखेपछि मात्र मलाई स्ट्रोक लाग्यो। प्रश्न यो हो बिक्री टोली ब्लग हुनु पर्छ? यहाँ परिणामहरू छन्:
तिमी म सँग जिस्केको? 55.11% कम्पनीहरू तिनीहरूको बिक्री व्यक्ति ब्लगमा निषेध गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले ... यदि त्यस्तो कम्पनीको मामला हो जुन मैले व्यापारको बारेमा सोचिरहेको छु भने, मेरो सोच बदल्नको लागि यो पर्याप्त छ। यहाँ किन छ:
इमानदारी - स्वाभाविक रूपमा, यसको मतलब विक्रेताहरू अनलाइन कुराकानी गर्न भरोसा गर्न सकिँदैन। र यदि त्यो केस हो भने, तिनीहरू सायद ईमानदारीपूर्वक अफलाईन संचार गर्दै छैनन्।
स्थिति - यदि तपाईको संगठन भित्र व्यक्तिहरुको समूह छ भने ब्लग निर्मित, यो तपाइँको बिक्री मान्छे हो। तपाईंको बिक्री स्टाफले तपाईंको उत्पादनको स्थिति, तपाईंको प्रतिस्पर्धा, तपाईंको सामर्थ्य, तपाईंको कमजोरीहरू बुझ्दछ - र नकारात्मक प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवहार गर्ने बुझ्दछ।
दर्शक - तपाईंको ब्लगको तपाईंको दर्शक समान संभावनाहरू हुन् जुन तपाईंको बिक्री स्टाफले दैनिक आधारमा सम्पर्क गरिरहेका छन्!
तपाईंको ब्लग एक विक्रेता हो। सम्भावितहरू तपाईंको ब्लगमा उही उत्तरहरू खोज्दै छन् र उही मुद्दाहरूको खोजी गर्दैछ जब उनीहरूले फोनमा तपाईंको विक्रेतालाई बोलाउँदछन्। तिनीहरूलाई निषेध बिल्कुल हास्यास्पद छ। यदि तपाईं विक्रेतालाई ब्लग पोष्ट लेख्न विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले तिनीहरूलाई सम्भावितमा कुरा गर्न विश्वास गर्नुहुन्न।
म अव्यावहारिक छैन, म हो? यदि तपाइँको मार्केटिंग टीम सन्देश क्राफ्टिंग र ब्रान्ड धकेल्दै छ भने, अर्को मान्छेहरु लाई सम्झौता बन्द गर्न को लागी तपाइँको बिक्री मान्छे हो। म भोली छैन, मलाई थाहा छ त्यहाँ केहि सीमाहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो ब्लगमा विक्रेता भन्न चाहानु हुन्न… जस्तै Badmouoming प्रतिस्पर्धा वा अर्को ठूलो सुविधा बेच्न जुन अगाडि बढिरहेको छ… तर त्यसले तपाईको मार्केटिंग संचार टोलीबाट थोडा दिशा लिन्छ। ।
यो अर्को ठूलो कारण हो किन कि बिक्री र मार्केटिंग बीचको पर्खाल बिग्रिनु पर्छ। CMOs र VPs को बिक्रीबाट छुटकारा पाउनaमा सारौं प्रमुख राजस्व अधिकारी जहाँ रणनीतिहरू विकास र डिप्लोय गरिएका छन् - र निर्णयहरू लिने व्यक्तिहरू वित्तीय नतीजाहरूको लागि उत्तरदायी हुन्छन्।
टैग: प्रमुख बजार अधिकारीप्रमुख राजस्व अधिकारीकसरीबिक्री ब्लगिंगबिक्री को उपाध्यक्षबिक्री को vp
जुलाई,, २०१ at 11::2012। बिहान
बिक्री पेशेवरहरू ब्लग हुनुपर्दछ कि हुँदैन भन्ने उत्तर दिनको लागि, मेरो उत्तर मेग र्यानबाट प्रेरित हुन्छ "" जब ह्यारीले मेट्यो। " हो! हो! हो!